Ubuchwepheshe kudivayisi Ukushisa phansi kuhilela ukusetshenziswa ekhethekile Ukushisa izakhi. Kunezinhlobonhlobo zezindlela ezimbili eziyisisekelo ukuze inhlangano izinhlelo ezifana: luthi alufane apharathasi nge kunyatheliswa amanzi ashisayo kanye ebeka izingxenye kagesi for bafudumale. Kuze kube manje, iyashelela futhi ukonga e ukufakwa neyaziwayo isimiso sikagesi, okuyokwenza ukuba uqaphele Ukushisa mat Ukushisa phansi nge Izilawuli isikhonzi. Empeleni, lolu hlobo Ukushisa izimele, nakuba ngokuvamile isetshenziswa njengenhlangano asizayo. Noma kunjalo, uma ukhetha mat kwesokudla bese ufake nabo ngendlela efanele, isethi impela lapho zibhekene nomsebenzi Ukushisa e iliphi igumbi.
Uyini mat okwesikhathi phansi efudumele?
UMats Ukushisa phansi kungabhekwa njengokwenzeka inhlanganisela izintambo bendabuko negobolondo multilayer. Ngesisekelo enamathela zethusi noma steel izintambo kagesi - baba iwumthombo ukushisa. igobolondo Okuningi nzima ubukeka kudivayisi. Kuyinto Ukuvikelwa ekuvikeleni ezakhiwe polymer endwangwini, fiberglass iraba. Kusukela izintambo ngoba underfloor bafudumale amacansi izinsuku ezahlukene ngoba anezikhala non-metallic, okuyinto phezu nakho embozwe i igobolondo aluminium kanye ifilimu PVC. Empeleni, lesi insulators Bokuhlela kusiza ukuqinisekisa ukuvikeleka eliphezulu izintambo ekulimaleni lokukhanda. Umsebenzi amacansi unikeza amandla kusukela amapayipi ngezinye 220, okuyinto ixhunywe "abandayo" ikhebula kuphelile. Ngaphezu kwalokho ugesi ezingenayo ihumusha aluminium Ukuvikelwa ukushisa, okuyinto yena, ukusabalalisa phezu yonke indawo flooring zokuhlobisa.
Single-core noma ezimbili-core?
Ngokwesiko amacansi zenziwa ne iinthombe izintambo okuqinile ayibi ngaphezu kuka-3 mm obukhulu. Nokho, muva nje, abanye abakhiqizi Yaqala ngo imodeli umugqa nesisontekile pair ikhebula. Ngaphandle okwandisa ukushuba ezinengilazi abanjalo futhi umehluko tekusebenta. Iqiniso lokuthi Ukushisa amacansi ngocingo eziqinile inqubo yokudala okungekuhle for emisebeni womuntu kagesi. Yiqiniso, kuba ngaphakathi amagugu ovumelekile, kodwa ngenxa yalesi sizathu, ochwepheshe batusa ukusetshenziswa izakhi yalolu hlobo lapho efakaza emgwaqweni wabe ezakhiweni, hhayi isakhiwo. Ikhebula ezimbili wire lokhu yokusilela siqedwa ngokusebenzisa iinthombe wire yesibili, okuyinto "extinguishes" the kagesi emisebeni ensimini. Ngakho, inzuzo engaphezulu ukuthenga le amacansi amabili-core ikhebula, kodwa kubalulekile sikhumbule ukuthi ayabiza futhi eminye ukunciphisa ukuphakama ophahleni.
Ukukhetha amandla uhlaka
umbuzo Simple futhi impendulo yalo kufanele kuqala ukunquma ukuthi iyiphi indawo esiyoba ingqikithi evuthayo phansi bafudumale system. Ngokusekelwe izibalo kokuqala, singakwazi ukuthola oda zasemphakathini, isimiso, walungisiswa ukusetshenziswa kwalolo hlelo. Uma ukufakwa Ukushisa amacansi Kuhlelwe yokugezela, lemali Kunconywa kwamandla kuyinto 150 W / m 2. Leli hholo futhi ekhishini Ukushisa izidingo akuzona okusezingeni eliphezulu ngakho futhi kungenzeka ukuze unciphise namandla 120 W / m 2. Ukulinganisela eliphakeme lokumele aniketwe, uma ukufakwa uzobe kwenziwe yezingane ikamelo, lokulala noma emphemeni - kulesi simo kubalulekile ukubheka eduze amacansi, amandla ezingaba akuyona esingaphansi 200 W / m 2.
Inzuzo Ukushisa amacansi kuyinto zesakhiwo ngokusebenziseka kalula futhi kuhlaziywa indawo ukufakwa. Akudingeki ukuba zakhipha silungise inyoka noma Kuvunguza - nje ukusika isiqeshana osayizi abathile futhi yalala emhlabathini. Nokho, kungase kube umehluko wemisindo nemiqondo yamagama ukuthi kufanele kucutshungulwe. Okokuqala, Ukushisa amacansi akumele sibekwa izindawo lapho kuyoba ogandaganda, ifenisha noma ngemishini. Okwesibili, kubalulekile ukubala izinzwa lokushisa Isikhala amath-. Ukuze wenze iphutha izibalo ayacelwa ukwenza uhlelo ukufakwa, lapho zonke izinto loMkhandlu uhlelo uzohlonzwa. Njengoba yenziwe ngu isakhiwo ngeke kuphela ukunciphisa izindleko ukufakwa, kodwa futhi nokwandisa uhlelo ngokuya ukonga amandla ukusetshenziswa.
Ihambisana ngezindwangu zokumboza phansi
Ukushisisa amacansi, kanye zonke kagesi ukushisa umthombo Uthwale phansi, ingahlanganiswa ngezinto ezahlukene. Okuhle kunakho konke ukuthi, uma ukufakwa wenziwa phansi kukhonkolo. Ekuqaleni kufanele uhlele substrate futhi ungangenisi amanzi, bese ufake uhlelo bafudumale. Endabeni emphemeni ongaphezulu inketho ekahle kungaba Tile, okuyinto umqhubi ezinhle ukushisa futhi akusho deform ushukunyiswa yiwo. Kodwa endabeni bokhuni zokwenziwa ebusweni Ukushisa amacansi afaneleka nabanye imikhawulo. Ngokwesibonelo, laminate efanelekayo linoleum futhi topcoat ngaphansi phansi evuthayo kuphela imiklamo ekhethekile amelana ekucindezelekeni ezishisayo. Parquet ukusetshenziswa futhi is hhayi Kunconywa, njengoba izinqubo deforming liboniswe ekuseni njengoba ukusetshenziswa okokuqala.
A isitayela endaweni emakiwe is bahlanza futhi isilungele ukufakwa. Desirably konke ukushiyeka enamathela anolaka primed noma aphathwe yamathebhu Ukushisa amacansi inhlangano eyenziwa phezu flat. Unrolling umqulu kobude we ingxenye ke emgqeni ephawulwe, lapho amacansi kuyoba eseduze plinth. Ngakho-ke iviyo lokuqala selibekiwe wanquma ukuba ucezu wakhe eyabelwe. Kubalulekile ukuba bakhumbule ukuthi kumele uthathe kuphela kugridi, ukuze lithe kungenzeka esikhathini esizayo baphonse ikhebula ku imichilo yesibili futhi okwalandela.
Njengoba wenza ukufakwa kumele ngezikhathi unwinding roll, ukwenza kwezitshalo bese uphendukisa izintambo esiqondisweni entsha ngokuhambisana idayagramu. Kumele kukhunjulwe ukuthi izintambo akumele ewela - singalokothi sithintane engacelwanga kuzokwenza circuit, kokulimaza Ukushisa mat. Ukubeka emaphethelweni nge ukusebenza test system. Ungene Ukushisa iyunifomu kuzo zonke izindawo Ukushisa enamathela.
Thermostat kanye inzwa lokushisa
elementi okuphoqelekile yesimanje Ukushisa phansi izinhlelo kuyindlela ekhethekile wokulawula ukusebenza kwabo imingcele. Lokhu ngokuyinhloko amath-. Zingaba ngekhompyutha nge uhlu ubuncane ongakhetha noma ehlelwe - ne ikhono ukusetha isibali. Futhi, kukhona onobuhle lapho uhlelo kuhlanganiswe "smart" timer. Kulokhu, lo Ukushisa mat Ukushisa phansi alungiswa nge-othomathikhi ngokuvumelana lokushisa inzwa amagugu. Ngokwesibonelo, uma inkomba lokushisa lize liba ngaphansi kwe ezingeni elithile, uhlelo isebenza "ukufudumala", futhi efudumele, kunalokho, cisha noma ushintshe imodi esebenzayo.
Izibuyekezo Ukushisa amacansi
Imibono abathengi ku Ukushisa amacansi washintsha. Phakathi izinzuzo abasebenzisi babike kalula ukufakwa kanye nokusebenza elingenazinkinga. Nokho, ngaso sonke isikhathi isimiso esinjalo ufaneleke ngokwayo ngokuya Ukushisa kahle. Kodwa kuxhomeke kakhulu amandla, okuyinto has a othize Ukushisa mat. Izibuyekezo zabantu abasebenzisa Ukushisa ekhazimulayo phansi ngokuthi "umsizi" Ukushisa emaphakathi, ngokuphambene, bonisa ukusebenza.
Umbuzo ka ukuthi ayisebenzise Ukushisa phansi emakamelweni lapho Ukushisa ezengeziwe akuyona ngisho nokuzihlupha ochwepheshe. Bona nakanjani batusa lwalezi nhlelo esikhundleni radiators, amaziko kanye nezinye Ukushisa kusho yisikhathi. Uma sibheka kwezibalo abakhiqizi idatha, kuba sobala ukuthi akuyona indawo yokugcina ke ithatha Sales Ukushisa mat. Indlela ukukhetha imodeli kahle izimfanelo isimiso esinjalo - nanku umbuzo main elibheke umsebenzisi. Nokho, nenqubo ebalulekile ezimbili kuphela. Lena - amandla endaweni. Indaba kufanele amboze yonke "ukusebenza" indawo futhi ngaleyo ndlela ahlinzeke ukushisa eyanele isizukulwane. Eminyakeni yamuva, njengoba kukhona Ziphikisana kuze kufike walungisiswa ukusetshenziswa amacansi efudumele ngokuya ukonga. Yiqiniso, izindleko ezithile e ukusebenza kuyoba, kodwa musa ukuya ngokuqinile nanoma ikuphi ukuqhathaniswa ne outlay yezimali ukufakwa kanye nokusetshenziswa kwezinye bafudumale izinhlelo.
Indlela ukulungiselela odongeni ngoba wallpapering: imithetho embalwa
Indlela ukuthatha Chihuahua lokuzalwa ekhaya (isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo)